Faa'iidooyinka carruurta haysashada eyga oo ay tahay inaad ogaato | Bezzia
Faa'iidooyinka waaweyn ee carruurta leh eyga
Faa'iidooyinka waaweyn ee carruurta eey eyga ayaa la ogaan doonaa laga bilaabo daqiiqada ugu horeysa. Sababtoo ah waa run in mararka qaarkood marka haysashada xayawaanku ay naga dhigayso inaan ka fikirno wax ka badan laba jeer. Ma garanayno sida midowga u dhexeeya carruurta iyo xayawaanku u noqon karo, in kasta oo sida caadiga ah ay had iyo jeer ka iman doonto wanaag.
Badi waxay jecel yihiin xayawaanka iyo eyda xitaa waxoogaa ka badan. Markaa durbaba waa calaamad wanaagsan iyo war wanaagsan. Laakiin taasi waa intaas oo dhan kadib waxaa jira koboc maskaxeed oo anfici doona carruurtaada. Marka, waa waqtigii si qoto dheer loo ogaan lahaa dhammaan faa'iidooyinka lahaanshaha xayawaanka guriga.
1 Sida Eeyuhu u Caawiyaan Carruurta: Waxay yareeyaan Cadaadiska
2 Caafimaad roon iyo xasaasiyad yar
3 Dareem ammaan
4 Waxay u dhaqaaqi doonaan wax badan
5 Waxay noqdaan kuwo ka masuul ah
6 Waxay hagaajiyaan curaarta saamaynta leh
Sida Eeyuhu u Caawiyaan Carruurta: Waxay yareeyaan Cadaadiska
Markay carruurtu la koraan eeyaha, waxaa abuurma dammaanad gaar ah. Waxaa iska cad in xayawaanku ay saaxiibo fiican la yihiin carruurta iyo sida kale. Sidaa darteed, waxay dareemayaan in si weyn loo ilaaliyo, wax sidaas ah waxay kor u qaadi doontaa isku-kalsoonaanta in yar iyo sidaas oo kale, waxay yarayn doontaa walbahaarkaas oo soo muuqan kara ama, welwelka ku daraya dhibaatooyin kale. Keliya laabta ama taabashada eyga, buuqaani wuu yaraan doonaa. Markaa durbaba waa mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee lagu xisaabtamo.
Caafimaad roon iyo xasaasiyad yar
In kasta oo ay run tahay in aan u malaynayno in lahaanshaha xayawaanku ay wax walba noqon doonaan inay yeeshaan cudurro cusub oo kala duwan, sidaas ma aha. Dhab ahaantii, daraasaduhu waxay xaqiijinayaan in cagsigeedu run yahay. Waxay u muuqataa inay ka mid tahay faa'iidooyinka waaweyn ee carruurta haysashada eyga caafimaad ka wanaagsan guud ahaan ayaa lagu daraa, laakiin gaar ahaan ka saarista xasaasiyadaha qaarkood nolosheena. Sababtoo ah haddii ay la nool yihiin xayawaanka iyaga oo yar, nooc ka mid ah difaaca ayaa soo baxa oo difaaca jirka carruurta ayaa soo hagaagaya.
Carruurta yaryari waxay dareemi doonaan ammaan badan marka eyga ag joogo. Sababtoo ah kuwan ku siiyaan dareenkaas amni. Maadaama ay had iyo jeer u joogi doonaan marka loo baahdo iyo maadaama aysan xayawaanku canaanan ama dhibin, waxay og yihiin inay tahay taageero aan shuruud lahayn. Sidaa darteed, waxaas oo dhan waxay dareemaan raaxo badan marka ay dhinaciisa joogaan tanina waxay la xiriirtaa wixii hore ee aan soo sheegnay ee ku saabsan walaaca.
Waxay u dhaqaaqi doonaan wax badan
In kasta oo ay run tahay in waalidku noqon doono kuwa eyga u soo lugeeya, kuwa yaryar ayaa iyaguna raaci kara. Waxaa iska cad in haddii aad ku nooshahay guri, ay had iyo jeer jiri doonto boos badan oo carruurtu kula cayaari karto xayawaanka. Tani waxay leeyihiin nolol firfircoon. Wax mar walba lagu taliyo, maadaama marka lagu daro kobcinta cilaaqaadka ay sidoo kale maskaxda ka dhigto mid cad, farxad ayaa u timaada noloshooda madadaalada ayaa dardar gelisa iyo sidoo kale dareenka farxadda. Markaa had iyo jeer waa shirkad wanaagsan!
Waxay noqdaan kuwo ka masuul ah
In kasta oo aysan ahayn wax aan maalinba maalin aragno, haddana waa run in mustaqbalka fog aan sidaas dhihi karno kuwa yaryar waxay noqon doonaan kuwo mas'uul ka ah. Sababtoo ah waxay ka warqabi doonaan fikradaha aasaasiga ah waana mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka carruurta haysashada eyga. Waa inay hubiyaan inay haystaan ​​biyo ama cunto mar walba, iyo sidoo kale waxay na weydiiyaan ama haddii ay fiicnaadaan ama ka soo horjeedaan. Sidaa darteed, carruurtu waxay bilaabaan inay walwalaan oo ay leeyihiin waajibaadyo gaar ah oo ay tahay inay fuliyaan daryeelka xayawaanka.
Waxay hagaajiyaan curaarta saamaynta leh
Waxay u muuqataa in faa’iido kale oo carruurta eyga leedahay ay tahay taas waxay ogaan doonaan sida loo sameeyo saaxiibo wanaagsan mustaqbalka. Sababtoo ah waxay ku kori doonaan mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan oo xasilloon oo ay yeelan karaan. Markaa sidoo kale waa qayb kale oo ka mid ah qaybaha aasaasiga u ah waxbarashada iyo nolosha ilmaha guud ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Mascotas » Faa'iidooyinka waaweyn ee carruurta leh eyga
Kaabsool cusub oo laga soo qaaday Zara iyadoo lala kaashanayo Kassl
Sida loo marsho ceebta wajigaaga